युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपाल बुद्धको जन्मभूमि, व्यवहारिक र आध्यात्मिक थलो हो : पर्यटन मन्त्री पोख्रेल
Tuesday, 10.22.2019, 09:34am (GMT+5.5) Home Contact
नेपाल बुद्धको जन्मभूमि, व्यवहारिक र आध्यात्मिक थलो हो : पर्यटन मन्त्री पोख्रेल
Tuesday, 04.12.2016, 01:24pm (GMT+5.5)
० बौद्ध सम्मेलनको तयारी कस्तो भैरहेको छ ?
हरेक वर्ष बुद्ध पूर्णिमाका दिन नेपाल लगायत विश्वघर नै बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आइएको छ । यो खासै नौलो विषय होइन । यसपाली भने यो नयाँ भयो । किनभने अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा आगामी जेठ ६ र ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध तथा शान्ति सम्मेलन गर्दैछौँ । त्यो काठमाण्डौँमा हुँदैछ । र ८ गते २५६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्ती हामीले लुम्बिनीमा मनाउदैंछौँ ।
यस पटकको सम्मेलनले जे प्रतिफल दिन्छ त्यसलाई हामीले लुम्बिनीमा गएर सार्वजनिक गर्नेछौँ । अर्को कुरा यसपटक हामीहरुले उद्देश्य सहितको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्ती मनाउँदै छाँै । थिम भनेको ‘लुम्बिनी नेपाल द बर्थ प्लेस अफ बुद्ध एण्ड फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म एण्ड वल्र्ड पीस’, (नेपाल बुद्ध जन्मेको थलो मात्र होइन, यो बौद्ध धर्मको उत्पति र विश्व शान्तिको मुहान पनि हो) भन्ने नाराका साथ नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार यो मनाउँदैछौँ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५०१ सदस्यीय मुल तयारी समिती बनेको छ । त्यस्तै मेरो नेतृत्वमा १ सय, २ सय कार्यकारी सदस्यीय कार्यकारी समिती बनेको छ भने अन्य विभिन्न ११ उपसमितीहरु बनेका छन् । सिङ्गो पत्रकारहरुलाई राखेर प्रचार प्रसार समिती बनेको छ ।
० यो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागीता कस्तो हुँदैछ ?
अहिले हामीले बुद्ध सम्मेलनको तयारीमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मे २१ (जेष्ठ ८ गते) मा निम्तो दिएका छौँ । भारतीय र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निम्तो दिएका छौँ । त्यस्तै विश्वका २३ राष्ट्रका संस्कृति मन्त्रीहरुलाई निम्तो दिएको छाँै । जापानका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निम्तो पठाउने तयारीमा छाँै ।
त्यसै गरी एनआरएनलाई यो सम्मेलनमा सहआयोजकका रुपमा राख्दैछौँ । अहिले नेपाल सरकार आयोजक, लुम्बिनी विकाश कोष, लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, एनआरएन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संगठन र अमेरिकन बौद्ध महासंघ यी दुई वटाबाट हामीहरुले समर्थन पाइसकेका छौँ भने अरु को को हुन सक्छन् हामीहरुले छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसै गरी विश्वभरका रिम्पोछे र भिक्षुहरुको सहभागीतामा भव्यताका साथ यो सम्मेलन मनाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।
० विगतका दिनमा पनि यस्ता सम्मेलन नभएका होइनन् । तर यो सम्मेलनको विशेषता के हुन्छ ?
पहिलो कुरा राज्यले यसलाई नियन्त्रण ग¥यो । अहिले राज्यले ठोस नारा तय गरेको छ । यो अहिलेको लागि मात्र होइन । यो नारालाई नेपालका सबै गुम्बाहरुमा लेख्न लगाउँछु । लुम्बिनी विकास कोषको पेपरमा अब यो नारा लेखिनेछ । यो नै आफैमा नयाँ भयो । यहि सन्दर्भमा २५६० औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा पारेर रमित ढुङ्गानाले निर्माण गरेको चलचित्र ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ पनि त्यहि दिनमा रिलीज गर्दैछौँ ।
० बौद्ध धर्मप्रति यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
बौद्ध धर्म भनेको शिक्षा र ज्ञान हो । मैले बौद्ध धर्मलाई पाँच सात दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छु । प्रेम, शान्ति, संस्कृति, धर्म, मानव अधिकार, न्याय र ज्ञानको दृष्टिकोण । यसलाई जसले जुन दृष्टिकोणले हे¥यो त्यही चिज पाउँछ ।
बुद्ध जन्मेको विषयमा फरक फरक विचारहरु पनि आउने गरेको छ । मैले बौद्ध धर्मको विषयमा कुरा उठाएपछि मेरो बारेमा विभिन्न टिप्पणी र चर्को आलोचना पनि हुने गरेको छ । मन्त्रीले जानेनन् । थाहा नपाएर बोले । तथ्य एकातिर छ, अर्कातिर गए भन्ने टिप्पणीहरु पनि आइरहेको छ । यी टिप्पणीहरुलाई मैलें हार्दिकतापूर्वक स्ीवकार गरेको छु ।
० बुद्धको जन्मथलोका बारेमा बेला बेला विभिन्न भ्रमात्मक अभिव्यक्ति आउने गर्दछन् । यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश पु¥याउला ?
हो, अहिले बुद्ध जन्मेको थलोको रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा केही भ्रमहरु पनि छन् । भ्रम सृजना गर्ने प्रयत्नहरु पनि भैराखेको छ । यो सम्मेलनमार्फत यसको अन्त्य हुने विश्वासका साथ यसको आयोजना गरिएको हो । पहिलो कुरा बौद्ध धर्म नेपालबाट सुरु भएको हो । सुरुवात भएको नेपाल विश्व शान्तिको भूमि हो । यो स्थापित हुन्छ र गरिन्छ । आज बोलें त्यसलाई निरन्तर प्रयत्न गर्नु पर्दछ । र दुनियाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो यसमा केही तथ्यहरु छन् । कसैले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् तर बुद्धको थलो बाराणसी हो भन्ने कुरा पनि छन् । कसैले उनको व्यावहारीक कर्मभूमि भारत हो भन्ने पनि छन् । तर यी सबैसँग म सहमत छैन ।
त्यो असहमति भनेको पहिलो सिद्धार्थ गौतम पछिल्लो पुस्ताका बुद्धिष्ट हुन् । त्यो भन्दा अगाडि पनि बुद्धिष्टहरु थिए । उनी भन्दा अगाडि छ, सात वटा बुद्धहरु थिए । ती नेपालकै हुन् । र उनले बुद्धिजमको सन्दर्भमा योगदान दिएका छन् । त्यसकारण बुद्धिजमको बिउ सिद्धार्थ गौतम जन्मनु भन्दा अगाडि पनि थियो ।
० यसलाई विश्वास गर्ने आधार के छ ?
यसमा कत्तिको सत्यता छ थाहा छैन । तर ब्रह्मलीपीमा लेखिएको छ– बुद्ध जतिबेला जन्मिए सात पाइला हिडें, हात ठड्याएर भने म यो पृथ्वीमा आएको छु । शान्ति, सद्भाव र प्रेमको लागि आएको हुँ । त्यसपछि म पृथ्वीमा जन्म लिन्न । यी लिपीमा लेखिएका कुराले के भन्छ भने, बुद्धमा साच्चिँकै आध्यात्मिक शक्ति थियो ।
अर्को कुरा बुद्धले २९ वर्षको उमेरमा तीन चिज त्याग गरे । घरबार, दरबार र राजकुमार पद त्याग गरे । यदि उनी आफूले बुद्धत्व प्राप्त नगरेको भए यी सबै चिज छोड्ने थिएनन् । उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेर नै यी सबै कुरा छोडे र त्यसलाई व्यवहारमा देखाए ।
उनले व्यवहारमा जे देखाए बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि दिने शिक्षामा पनि त्यही ज्ञान दिए । लोभ, भ्रम, हिंसाबाट मुक्त होउ । परस्त्रीलाई दमन नगर । कुलतमा नफस । उनले यो कुरा पछि भनेका हुन् । पहिले यो कुरालाई उनले व्यवहारमा लागू गरे ।
तपाई बोल्न खोज्नु भयो भने मैले चुप लाग्नुस भनेर साङ्केत गरेपछि तपाईले बुझ्नु हुन्छ । त्यतिबेला उनलाई कसैले पत्याउँदैनथ्ये । दुनियाँको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि यी सबैलाई उनले व्यवहारमा देखाए ।
बुद्धले अब यो मेरा लागि उचित समय हो भन्ने सोचेर घरबाट निस्किएर तपस्या गर्नका लागि बोधगयामा गए । त्यसपछि उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको घोषणा बोधगयामा गरे । त्यो उनले घोषणा गरेको र पहिलो पटक प्रवचन दिएको थलो हो । र समाधी पनि त्यहीं लिए । यति भारतमा भएको हो ।
जब उनी आफ्नो दरबार फर्किए, ओढारमा बसे । पहिलो भिक्षु पञ्चभद्र थिए भनिन्छ । उनी कपिलवस्तुकै थिए । त्यहीबाट उनका अन्य शिष्यहरु पनि भए । पहिलो महिला भिक्षुनीहरु पनि नेपालकै हुन् उनकी आमा र श्रीमती ।
बुद्धको त्रिरत्न नेपालबाटै सुरु भएको हो । बुद्ध, धर्म र संगम नेपालबाटै सुरु भएको हो । तीन ओटा सम्प्रदाय थेब्र्रा, महायान र बज्रयान पनि नेपालबाटै सुरु भएको हो । बुद्धको सबै कर्मभूमि नेपालमा भएको हो । त्यसैले नेपाल बुद्ध धर्मको आध्यात्मिक र व्यवहारीक उत्पतिको थलो हो । यही विचारको आधारमा हामीले फाउन्टेन अफ बुद्धिजम एण्ड फाउन्टेन अफ वल्र्ड पीस भन्ने मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छाँै ।
० अहिले यो स्थानमा तपाई हुनुहुन्छ । भोलि कस्को र कस्तो व्यक्तिको हातमा नेतृत्व जान्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । यो अवस्थामा यसलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?
हिजो के थियो र भोलि के हुन्छ होला यसलाई कसैले समातेर राख्न सकिदैन । म जतिबेला जहाँसम्म हुन्छु यसलाई निरन्तरता दिन्छु । यस्तो जग बन्ने छ जहाँबाट भोलि कोही पनि उम्कन सक्नेछैन । यो जगमा सबै अगाडि हुनुपर्ने छ । सात दृष्टिकोणले बुद्ध धर्मलाई हेर्न सकिन्छ । तपाईले जेमा पनि बुद्धलाई भेट्न सक्नुहुन्छ ।
आजको आधुनिक युगमा सबैभन्दा परिस्कृत र उत्कृष्ट धर्मको रुपमा मैले बुद्ध धर्मलाई हेर्ने गर्दछु । यो धर्म मानवको जीवनसँग गासिएकोले मानवतावादी दर्शनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु । जुन अन्यमा छैन । भोलिका दिनमा कसरी अगाडि जान्छ त्यो अर्को पाटो हो । म यो राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने हो । यहीबाट उत्पति भएको बुद्ध धर्मको दर्शन, ज्ञान नेपाली भूमिको प्रवद्र्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्यको निर्वाह मैले मन्त्रालयमार्फत गरेको छु । भोलिका दिनमा जुन व्यक्तिले नेतृत्व लिनुहुन्छ उहाँले पनि यसलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० बौद्ध विश्वविद्यालय व्यवस्थित नभएको भन्ने पनि छ । यस विषयमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
बौद्ध विश्वविद्यालय मेरो मन्त्रालयमार्फत नभइ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । तर यो सिद्धान्तलाई भरपर्दो रुपमा स्थापित गराउनका लागि मैले बौद्ध विश्व विद्यालयलाई पनि साथमा लिएको छु । अहिले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन सञ्चालकको संयोजक हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउनका लागि उहाँ लागिपर्नु भएको छ । त्यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि सबैभन्दा पहिले बौद्ध विश्वविद्यालयले स्थापित गर्ने कुरा पनि यहि हो । जे सत्य छ त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि यो विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ । मैले अहिले जे जति सुरुवात गरेको छु, त्यो सबैलाई स्थापित गर्ने काम लुम्बिनी विश्वविद्यालयले गर्नु पर्दछ ।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि यो सम्मेलनमा निम्तो दिइएको छ । भारतले यस विषयमा बेला बेला भ्रमात्मक र विवादात्मक अभिव्यक्ति दिने गरेको छ । यो सम्मेलनले त्यसको अन्त्य गर्ला ?
त्यो उहाँहरुको लोकतन्त्र हो । विषयलाई बुझ्ने तरिका कति छ ? तर हामी नेपालीले तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने हो । यहि तथ्यको आधारमा सत्यलाई म संसारको अगाडि राखि दिनेछु । छानबिन गर्ने काम उनीहरुको हो । एकै दिनमा यो समस्याको समाधान नहोला ।
प्रत्येक नेपालीले मेरो बुद्ध भनेर गर्व गर्छौ । तर सत्यलाई तोडमोड गर्न पाइदैन भनेर मैले सबैसामु निर्णय गराउनेछु । सत्य के हो त ? जन्म, सिद्धान्त उत्पति, कर्म र व्यवहारको दृष्टिकोणले यी सबैको उत्पति नेपालबाटै भएको हो । बुद्धै सबैका हुन् । सगम्रमा बुद्ध मानव जातिका सम्पति हुन् । बुद्धलाई हामी नेपालीले मात्र नभइ समग्र विश्वले कुनै न कुनै आँखाबाट हेरेको छ ।
० बुद्ध दर्शनको अध्ययन र अभ्यास गर्ने भनिएका गुम्बाहरुमा पश्चिमा राष्ट्रहरुको सहायता चासोको विषय छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत नभई स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बुद्ध दर्शन तथा गुम्बा व्यवस्थापन समिति भन्ने छ । यो बुद्ध जयन्ती समारोहमा त्यहाँका सदस्य सचिव र हाम्रो लामा पनि सहआयोजक हुनु हुन्छ । त्यहाँ मैले तीन ओटा भेला राखेको छु । यो विषयलाई मैले अगाडि सारेको छु । यसमा सबैले सहमति जनाउनु भएको छ । यसलाई सबैले समर्थन जनाउँदै खुशी पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।
० गुम्बाहरुमार्फत चीन विरोधी गतिविधिहरु हुने गरेको भन्ने विवादहरु पनि समय समयमा सुनिन्छ नि !
त्यो विषय उठेको छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा त्यस्तो केही भएको छैन नेपालमा । न चीन विरोधी लामाहरुले केही गरेका छन् । केही राजनीतिक व्यक्तिहरु बेला बेला आउँछन् । तर, यी सबैलाई राम्रो राज्यले ठिकठाक ढङ्गले राख्न सकेको छ ।
मनमा लागेको होला कसैलाई । मनमा लाग्दैमा सबै कुरा प्राप्त हुँदैन । हामी नेपाली एक चीन नीतिको पक्षमा छौं र हामी कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रका लागि हाम्रो भूमिलाई उपयोग गर्न दिदैनौँ । यहि यो हाम्रो सत्य सच्चाई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आधार पनि । यसको सेतु दुवै राष्ट्रका लागि बुद्धिज्म हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ‘बैशाख डे’ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले मनाउने गर्दछ । यो नेपाल र नेपालीका लागि गौरवको विषय पनि हो ।
० अन्त्यमा, बौद्ध सम्मेलनपछि बुद्धको यथार्थ प्रचारका लागि यहाँको नयाँ कार्ययोजना के हुनेछ ?
पहिलो यो मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने नै हो । त्यसपछि विश्वका धेरै बौद्धिष्टहरुलाई ल्याउँदैछौ । अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्रदान गर्दछाँै । आगामी २९ गते कुटनीतिक नियोगका मानिसहरुलाई बोलाएर सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ । त्यहि नै हो एउटा प्रचार प्रसारको माध्यम ।
हामीसँग पनि लुम्बिनी विकास कोष छ । त्यसलाई अझ परिचालन गर्दछौँ । त्यसले निरन्तर र विश्वव्यापी रुपमा काम गरिरहनेछ । अर्को एनआरएन पनि हाम्रो सहआयोजक छ । यिनै हाम्रा दूतहरु हुन् । विश्वभर नै बुद्ध र बुद्धिज्मको बारेमा नेपाल नै बुद्धभूमि हो भनेर प्रचार गर्ने । कोही पनि बुद्धको प्रचारमा नछुटुन र यसका लागि सबैको निरन्तरता आवश्यक छ ।